FAQ - Shenzhen Yonwaytech Co., Ltd.
Afisy LED rehetra ao anaty iray / antsinjarany
Famantarana ecran LED raikitra ivelany
Fampisehoana LED mitsitsy angovo ivelany
Eo anoloana mitazona LED Display
Fampisehoana LED fanofana sehatra
Ecran LED mangarahara / Facade Curtain LED Display
Ampidiro ny led afisy
Fampisehoana LED raikitra ivelany
Smartshelf nitarika vidiny
Toeram-pitaterana & Dokam-barotra amin'ny seranam-piaramanidina
Varotra ara-barotra & trano fandraisam-bahiny
Hetsika an-tsehatra an-tsehatra teatra & fampiratiana LED an'ny Fiangonana
Facade & Billboard fanaovana dokambarotra ivelany
1.Ecran LED digital vs projector — Iza no tsara kokoa?
Betsaka ny orinasa manomboka misafidyEcran LEDho an'ny efitrano fivorian'izy ireo fa tena tsara kokoa noho ny projector ve izy ireo?
Ireto misy lafin-javatra sasany tokony hodinihina:
1. Famirapiratana sy kalitaon'ny sary:
Lavitra kely amin'ny loharanon'ny hazavana (ny projecteur) ny efijerin'ny projector, noho izany dia very ny famirapiratry ny sary noho ny fizotran'ny projection.
Raha ny efijery LED nomerika no loharanon'ny hazavana, ka ny sary dia hiseho mazava kokoa sy mazava kokoa.
2. Ny haben'ny efijery:
Ny habeny sy ny famahana ny sary vinavinaina dia voafetra, fa ny habeny sy ny famaha ny rindrina LED dia tsy voafetra.
Azonao atao ny misafidy YONWAYTECH anatinynarrow pixel pitch nitarika fampisehoanamiaraka amin'ny fanapahan-kevitra HD, 2K na 4K ho an'ny traikefa mijery tsara kokoa.
3. Manisa ny vidiny:
Ny efijery LED nomerika dia mety lafo kokoa noho ny projector eo aloha fa diniho ny vidin'ny fanoloana takamoa amin'ny efijery LED vs motera hazavana vaovao ao anaty projector.
Mifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampinyvaovao.
2.Quality vs vidiny — Iza no zava-dehibe kokoa?
Ny takelaka LED nomerika avo lenta dia tsy mila mandany ny tany.
Noho ny fifandraisantsika tsara sy maharitra amin'ireo mpamatsy anay, dia hahazo ny teknolojia farany indrindra amin'ny vidiny mirary ianao.
Ao amin'ny YONWAYTECHLED Display, takatsika fa mila efijery LED azo itokisana sy maharitra ny mpanjifanay, ka izay no omenay.
3.Inona no fiheverana rehefa misafidy vahaolana amin'ny fampisehoana LED nomerika?
Ao anatiny vs ivelany, fifamoivoizana an-tongotra na fiara, fidirana.
Dinihoinona no habe digitale led écranhifanaraka amin'ny toerana misy, hiantohana ny fahitana ambony indrindra.
Ny famirapiratan'ny ecran LED no avo kokoa ny fanjifana herinaratra fa ny maizina loatra sy ny fahitana dia ho olana, arakaraka ny fametrahana.
4. Inona no maha samy hafa ny anatiny sy ivelany nitarika efijery?
Digital ivelanyledefijerydia ampiasaina indrindra amin'ny fampielezan-kevitra momba ny marika sy ny varotra satria afaka manolotra fampisehoana loko feno sy haavon'ny famirapiratana avo be.
Ary ny fametrahana azy any ivelany matetika dia mampitombo ny mety ho mpihaino azy.
Ny tontonana LED digital ivelany dia misynaoty tantera-drano ambony kokoaary vita amin'ny akora mateza kokoa mba hanohitra ny tontolo henjana sy ny hafanana ambony.
Ny efijery LED anatiny dia mety amin'ny fampiharana anatiny.
nyanatiny nomerika LED fampisehoanaNy teknolojia dia afaka manolotra loko mamirapiratra kokoa sy saturation.
Ireto ambany ireto ny lafin-javatra izay mampiseho ny fahasamihafana misy eo amin'ny efijery LED anatiny sy ivelany.
Io no iray amin'ireo fahasamihafana miharihary indrindra eo amin'ny efijery LED anatiny sy ivelany.
Ny efijery LED ivelan'ny trano dia misy LED manjelanjelatra maro ao anaty piksel iray mba hanomezana famirapiratana avo indrindra mba hahafahan'izy ireo mifaninana amin'ny hazavan'ny masoandro.
Fampisehoana LED ivelanymanolotra famirapiratana imbetsaka noho ny efijery LED Indoor.
Ny efijery LED anatiny dia tsy misy fiantraikany amin'ny masoandro, ary amin'ny ankapobeny dia mila mifaninana amin'ny jiron'ny efitrano ihany izy ireo, noho izany dia tsy dia mamiratra loatra izy ireo.
Yonwaytech led display indoor dia manome famirapiratana ambany nefa mitovy loko sy saturation amin'ny vahaolana avo lenta.
2. Toetran'ny toetr'andro ivelany
Ecran LED ivelanymahazatra mananaIP65 tsy misy ranonaoty satria tsy maintsy ho leak-proof, tantera-drano ary vovoka izy ireo.
Yonwaytech ivelany nitarika fampisehoana natao ho mora vakina amin'ny tara-masoandro sy mahatohitra ny mari-pana ambony.
Ny sarin'ny LED an-trano tsy misy rano dia matetika mipetraka amin'ny IP20.
Tsy mitaky fanoherana mitovy amin'ny tontolo ivelany izy ireo.
3. LED Display fanapahan-kevitramifidy
nypixel pitch (ny hakitroky na akaiky ny pixel)amin'ny fampisehoana LED, tsy mitovy amin'ny efijery fampisehoana anatiny sy ivelany.
Ny efijery LED ivelan'ny trano dia manana haavon'ny piksel lehibe kokoa sy famaha ambany kokoa satria hojerena lavitra kokoa izy ireo.
Mitaky pikantsary kely foana ny fampisehoana led anatiny noho ny halaviran'ny fijerena fohy sy ny habeny voafetra.
4. Hardware & Software Player Content
Ny fitaovana sy ny lozisialy dia mifandray amin'ny efijery LED ary mandefa ny mari-pamantarana horonan-tsary sy angon-drakitra mba hampisehoana votoaty.
Ny fitaovana sy lozisialy mifehy dia miovaova avy amin'ny rafitra namboarina manokana izay mamela ny fizotry ny fandaharam-potoana be pitsiny miaraka amin'ny fampidirana data mavitrika, mankany amin'ny rindrambaiko tsotra sy mora ampiasaina miaraka amin'ny fiasa kely indrindra.
3D ivelany Ecran LEDmila fitaovana fanaraha-maso an-kalamanjana ho an'ny tanjona playback.
Ity mpanara-maso ity amin'ny ankapobeny dia mitantana programa rindrambaiko voaaro amin'ny zon'ny mpamorona izay mitantana ny atiny amin'ny efijery LED ary manome fidirana lavitra sy famantarana famantarana.
Ny efijery LED an-trano amin'ny ankapobeny dia manana fampidirana mora sy haingana miaraka amin'ny loharanon-tsolika maromaro.Ireo loharanon-karena ireo dia misy mpanara-maso mahery vaika (toy ny onivelan'ny tranotsy nanan-kitafymaso 3D LED fampisehoana), karatra fitadidiana, solosaina entin'ny orinasa/PC, na fanaraha-maso tsy dia lafo vidy kokoa.
Ny fahafaha-manao amin'ny fitaovana fanaraha-maso dia manokatra ny safidy hampiasa programa rindrambaiko isan-karazany manomboka amin'ny lafo ka hatramin'ny tsy lafo ka tsy mampiasa mihitsy.
Mba miangavy remifandraisa aminay raha mila fanazavana fanampiny.
5. Inona avy ireo tombontsoa azo avy amin'ny YONWAYTECH?
1. Mahomby kokoa
Ny famantarana nomerika amin'ny toerana fiandrasana mpanjifa na mpanjifa dia afaka manome fialamboly sy fampahalalana mahasoa, mahatonga ny fotoana ho lasa haingana kokoa.
2. Fampitomboana ny vola miditra
Asehoy ny vokatra sy serivisy, tolotra manokana ary fampiroboroboana.
Amidio ny habaka doka amin'ny orinasa tsy mifaninana ary ankafizo ny fivarotana sy fidiram-bola fanampiny.
Miankina amin'ny fankatoavan'ny fahazoan-dàlana mifandraika indrindra.
3. Fanatsarana ny fifandraisana amin'ny mpanjifa sy ny mpiasa
LED famantarana nomerikaafaka manome vaovao, fampahalalana ary fanavaozana lehibe ho an'ny mpiasa sy ny mpanjifa amin'ny fotoana tena izy.
4. Hafatra vaovao
Amin'ny fampiasana famantarana LED YONWAYTECH, ireo mpanao dokambarotra dia afaka manara-maso tsara ny fahombiazan'ny fampielezan-keviny ary manova votoaty mifanaraka amin'izany ao anatin'ny minitra.
5. Ny fahatsapana voalohany farany
LED Display famantarana nomerikaivelan'ny orinasanao na ao anatin'ny orinasanao dia tsy vitan'ny hoe misarika ny mason'ny mpanjifa mety hitranga, fa manome fahatsapana miavaka fa ny orinasanao dia savvy sy mandroso.
6. Inona no dingana famokarana anao?
1. Ny sampan-draharahan'ny famokarana dia manitsy ny drafitra famokarana rehefa mahazo ny baiko famokarana nomena tamin'ny fotoana voalohany.
2. Mandeha any amin'ny trano fanatobiana entana ny tompon'andraikitra mba haka ny fitaovana.
3. Omano ny fitaovana miasa mifanaraka amin'izany.
4. Rehefa vonona ny fitaovana rehetra,Atrikasa famokarana fampisehoana LEDmanomboka mamokatra toy ny SMT, onja-soldering, modular aoriana anti-corrosion loko, Modular anoloana rano porofo gluing amin'ny ivelany nitarika fampisehoana, saron-tava screwed, sns.
5. LED Modules fitsapana fahanterana amin'ny RGB ary fotsy tanteraka amin'ny 24 ora mahery.
6. Miara-miasa amin'ireo mpandraharaha mahay izahay.
7. LED Display atrikasa fitsapana fahanterana amin'ny mihoatra ny 72 ora fahanterana amin'ny RGB sy fotsy tanteraka, koa ny lalao video.
8. Ny mpiasan'ny fanaraha-maso ny kalitao dia hanao fanaraha-maso kalitao aorian'ny famokarana ny vokatra farany, ary hanomboka ny fonosana raha mandalo ny fisafoana.
9. Aorian'ny famonosana, ny vokatra dia hiditra ao amin'ny trano fanatobiana entana efa vonona amin'ny fandefasana.
7. Hafiriana ny fe-potoana fanaterana vokatra mahazatra anao?
Ho an'ny santionany, ny fotoana fanaterana dia ao anatin'ny 5 andro fiasana.
Ho an'ny famokarana faobe, ny fotoana fanaterana dia 10-15 andro aorian'ny nandraisantsika ny fandoavam-bola.
Ny fotoana fanaterana dia hahomby aorian'ny ① mandray ny petra-bola, ary ② mahazo ny fankatoavanao farany momba ny vokatrao izahay.
Raha tsy mahafeno ny fe-potoanao ny fotoana fanaterana anay, azafady mba jereo ny fepetra takinao amin'ny varotrao.
Amin'ny toe-javatra rehetra, dia hiezaka izahay mba hanome izay ilainao, ny ankamaroany, YONWAYTECH nitarika fampisehoana afaka manao izay tsara indrindra mifanaraka amin'ny zavatra ilainao.
8. Ahoana ny momba ny saram-pandefasana?
Ny saran'ny fandefasana dia miankina amin'ny fomba fidinao hahazoana ny entana.
Express no fomba haingana indrindra nefa lafo indrindra.
Ny fitaterana an-dranomasina no vahaolana tsara indrindra ho an'ny vola be.
Ny taham-pitaterana entana dia tsy azonay omena anao raha tsy fantatray ny antsipirian'ny vola, ny lanjany ary ny lalana.
9. Inona no fitaovana fifandraisana an-tserasera anananao?
Ny fitaovana fifandraisana an-tserasera an'ny orinasanay dia misy ny Tel, Email, Whatsapp, Messenger, Skype, LinkedIn, WeChat ary QQ.
10. Inona ny fiantohana vokatra?
Miantoka ny fitaovana sy ny asa tananay izahay.
Ny fampanantenana dia ny hahatonga anao ho afa-po amin'ny vokatray.
Na inona na inona misy fiantohana, ny tanjon'ny orinasanay dia ny hamaha sy hamaha ny olan'ny mpanjifa rehetra, mba ho afa-po amin'ny fandresena avo roa heny ny rehetra.
11. Inona ny laharana fitarainana sy adiresy mailakao?
Raha manana tsy fahafaham-po ianao dia alefaso any ny fanontanianaoinfo@yonwaytech.com.
Hifandray aminao izahay ao anatin'ny 24 ora, misaotra indrindra amin'ny fandeferana sy ny fahatokisanao.
Toerana:Yutang Community, Distrika Guangming, Shenzhen, PR Sina
(WhatsAPP & Wechat misy)
© Copyright 20102021 : Zo rehetra voatokana. <